Myanmar – Thabarwa Centre
သဘာဝတရား ရိပ်သာမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏
သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသော Guided Insight Meditation တရားတော်များသည် ………နေရာဒေသမရွေး-လူမျိုးဘာသာမရွေး-အချိန်မရွေး မှန်ကန်နေမည့် သစ္စာတရားတော်များ ဖြစ်ပါသည်။ …… လူမျိုးတမျိုး – ဘာသာတစ်ခု နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည် မဟုတ်ပဲ အကန့်အသတ်အားလုံးမှ လွန်မြောက်နေသည့် သစ္စာတရား ကို ဆရာတော်မှ တိုက်ရိုက် ရှင်းပြသဖြင့် (ဓမ္မာနုပဿနာ တရားနည်းဖြစ်သဖြင့်) နားလည်စေရန် စိတ်ရှည်ရပါမည်။
သန်လျှင် သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ဟောကြားတဲ့ ဓမ္မာနုပဿနာ သစ္စာတရားများကို ကျွန်တော့်၏ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ နှင့် စာဖတ်သူများ နားလည်မှုလွယ်ကူစေရန် တရားဆာင်းပါး၊ အီးဘုတ်၊ Mp3 အသံဖိုင်များဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ကို သဘာဝရိပ်သာနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ် များကို Activities မှ တဆင့် အကြောင်းကြား ကြေညာချက်များ ပြုလုပ်ပေးပါမည်။
တရားနားလည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ တရားဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၌ ဖြစ်စေ တစုံတရာ အခက်အခဲရှိပါက reply မှဖြစ်စေ၊ soewinhtut1977@gmail.com သို့ဖြစ်စေ တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ
Website Author & Administrator
Solving The Problems Of Sickness And Old Age
We will take care of ourselves when we are sick. Likewise we should take care of sick and infirm.
We will need help from others when we are old. Likewise we should help the old and the frail.
It is better for us to help and assist those who are in need rather than we ourselves are in need.
ဖျားနာခြင်းနှင့်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကြောင့်တွေ့ကြုံရသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း
ကိုယ်ဖျားနာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှာဖြစ်သလိုသူများဖျားနာတာ ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ကိုယ်အသက်ကြီးရင် သူများအကူအညီလိုအပ်မှာဖြစ်သလို တခြားသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို
ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာထက်စာရင် ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကို ကူညီရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။